မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Code, code ကို, လိပ်စာ
အဘယ်အရာကိုမြို့ 841 ရှေ့ဆက်ကိုက်ညီ?
အဘယ်အရာကိုမြို့ 841 ရှေ့ဆက်ကိုက်ညီ? သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြ၏ရှေ့ဆက်ကဘာလဲ? ခေါ်ဆိုမှုကုဒ်? 841 Penzenskaia ဒေသ (8412) XX-XX-XX Penza (84140) x-XX-XX Bessonovka (84141) x-XX-XX Bekovo (84142) x-XX-XX Vadinsk (84143) x-XX-XX Bashmakovo (84144 ) ...
Omsk အတွက်ကာဇက်စတန်သံရုံး။ မင်္ဂလာပါ ငါသည်ငါ့သမီးသာကာဇက်စတန်ရဲ့မွေးစာရင်းနှင့်လူတစ်ဦး၏အတည်ပြုချက်ကိုတစ်ဦးလက်မှတ်၏လက်မှာစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲ Samara B-Chernigov ဒေသတှငျနထေိုငျ, ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရန်သင့်အားမေးပါ ...
Beeline မော်စကိုငါ၏အအကောက်အခွန် Monster ဆက်သွယ်ရေး SMS ကို-2007 10 ရူဘယ်တန်ဖိုးရှိပြောင်းလဲသွားတယ်! ငါ့ကိုပိုပြီးအဆင်သင့်အခွန်ပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး
Beeline-Moscow သည်ဆက်သွယ်ရေးနဂါး၏ ၂၀၀၇ SMS ကို ၁၀ ဒေါ်လာရူပီးပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပိုမိုသက်သာခွင့်ပေးသည့် 2007 ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ ၁ ။ Beeline အကောက်ခွန်အစီအစဉ်များ - အမြတ်အစွန်းအသစ်သောအခွန်အခများ ... sim10.rushop / beeline / tariffs / 0611 ။ အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများ ...
အင်တာနက် MTS megabytes အတွက်ရမှတ်ပြောင်းပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အင်တာနက် MTS megabytes အတွက်ရမှတ်ပြောင်းပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဝန်ဆောင်မှု option ကိုငါး-megabyte (50Mb) သတ်မှတ်ခြင်းကအင်တာနက်ပေါ်တွင် MTS ရမှတ်ကိုပြောင်းလဲနည်း။ ဝန်ဆောင်မှု 150 အချက်များကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပျဆုကြေးငွေအရေအတွက်။ Service ကို Code ကို ...
ဒါကြောင့်တဦးတည်း iota ထံမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
ဒါကြောင့်တဦးတည်း iota ထံမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုဘာသာပြန်ဆိုပေးဆောင် Yota မဖြစ်နိုင်ဘူး, ဘုရားသခငျအဲဒီမှာပိုက်ဆံ ထား. , သငျသညျကျောမလာကြဘူးမှားယွင်းစွာသင်သည်မြစ်တား ... သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားမည်ဖြစ်ပြီး ...
လတ်ဗီးယား + 371 ကိုပဌနာကိုဘယ်လို ** *** *** လတ်ဗီးယားအတွက်မိုဘိုင်းနံပါတ်များကို 8 ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုဂဏန်း, မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏ကုဒ်နံပါတ်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်6မိုဘိုင်းကွန်ယက်မိုဘိုင်းကွန်ယက် NMT93Mobilnaya ပါဝင်ပါသည် ...
Buttermilk များ၏ရွာအဘယ်မှာရှိသနည်း မစစ်မှန်သောကာတွန်း
Prostokvashino ရွာဘယ်မှာလဲ။ ကာတွန်းမဟုတ်ဘဲရုရှား၊ Nizhny Novgorod ဒေသ၊ Prostokvashino ရွာ။ ဤသူသည် Tynda, Rostov, Moscow နှင့် Leningrad ဒေသများ၏ Yandex မြေပုံများဖြစ်သည်။ ရုရှား၊ Nizhny Novgorod ဒေသ၊ Tonkin ခရိုင်၊
ပြည်သူ့ !!! ဘယ်သူတည်ရှိပြီးသောအဘယ်အရာကို 351 အော်ပရေတာကုဒ်နှင့်ဒေသတွင်းသိတယ် ...
လူများ !!! မည်သည့်အော်ပရေတာကုဒ်နံပါတ်သည် ၃၅၁ ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ Chelyabinsk ။ မပြည့်စုံသောအရေအတွက်ကိုမေးသောအခါဘာဖြစ်မည်ကိုသင်သိသည်။ %:%: »%;! 351 ()%; နံပါတ်ကဘာလဲ ??? ? ကုဒ် + ၇ ...
၄၉၄ မည်သည့်မြို့၏ကုဒ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူသိသနည်း။ Kostroma (ရုရှား) Kursk Fixed line - Kostroma ဒေသ (494 8) Fixed line - Antropovo (494 8) Fixed line - Bogovarovo (49430 8) Fixed line - Buoy ...
တစ်ဦး Simca Yota ဘယ်လောက်ပါလဲ? အဘယ်ဒီအော်ပရေတာအတွက်စသည်တို့ကိုဆက်သွယ်ရေး, အင်တာနက်များ၏စျေးနှုန်း?
Yota sim card ကဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်တာနက်နှင့်ဤအော်ပရေတာအတွက်အခြားစျေးနှုန်းများကဘာတွေလဲ။ p ၃၀၀ သို့သော် Beeline ၏“ all for” အကောင့်နှင့် postpay အပေါ် ပိုမို၍ အမြတ်အစွန်းသည်။ သူတီထွင်မထားဘူး ...
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ငါ့ကိုခြားနားချက်အတွက်အဓိကစံကိုပြောပြပါ .1 ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားခြားနားချက်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင်၊ “ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” နှင့်“ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရများကိုအဓိပ္ပာယ်တူအဓိပ္ပာယ်တူအသုံးပြုသည်။ သို့သော်တရားဝင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊
စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်နေထိုင်သောသူတို့အားမေးခွန်းထုတ်ပါ။ လိပ်စာ "lit. ", "pom ။ " ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်နေထိုင်သောသူတို့အားမေးခွန်းထုတ်ပါ။ လိပ်စာ "lit. ", "pom ။ " ဘာကိုဆိုလိုသလဲ lit-lite, pom-premise စာရင်းအင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကိုအိမ်ခြံမြေအတွက်နည်းပညာစာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်းများ (OTI) ၏ပြင်ဆင်မှုတွင်အသုံးပြုသောခွင့်ပြု ...
မော်စကိုမြို့ရှိစာတိုက်၏ 125993 လိပ်စာကိုပြောပြပါ
အပေါ် Posted 01.09.2018 18.09.2018
ငါ့ကိုစာတိုက် 125993 မော်စကို 125993 မော်စကို, လီနင်ဂရက် Prospect, 37, 167-A-3 GSP စနစ်ချစ်ခင်ရပါသောမိုက်ကယ်၏လိပ်စာကိုပြောပြပါ! ဝက်ဘ်ဆိုက်ယခုအချိန်တွင်မှာအညွှန်းကိန်း၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းဆို Mospochty! ဒါဟာသေချာစေရန်လွယ်ကူသည် ...
8805 ******* ပေးသောအော်ပရေတာများနှင့်မြို့သူမြို့သား?
8805 ******* ဘယ်အော်ပရေတာနဲ့မြို့လဲ။ ကုဒ် (8) 805 ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ခေါ်ဆိုမှု။ Code / Range / စွမ်းဆောင်ရည် / အော်ပရေတာ / တိုင်းဒေသကြီး 8051000000100999910000 Intercity နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး Rostelecom Moscow 8051010000101999910000Rostelecom ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 8051100000110999910000 တိုင်းပြည်ComMoscow 8051200000120999910000 Petersburg TelecomMoscow8051230000123999910000 Petersburg
906 ဤဒေသသည်မည်သည့်ဒေသဖြစ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်မိုဘိုင်းအကြောင်းပြောပါက beeline ဖြစ်သော်လည်းအော်ရယ်လ်ရှိမတူညီသောဒေသများတွင်ထိုကဲ့သို့သောအရာများရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းပြောပါက +7 (906) xxxxxxxx - ခေါ်ဆိုသောအခါ ...
သင့်ရဲ့ဇစ်ကုဒ်, Kostroma ၏မြို့ကဘာလဲ? အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြည့်ရှုမနေပါနဲ့
Kostroma အတွက်စာပို့သင်္ကေတကဘာလဲ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်မကြည့်ပါနှင့် Kostroma OblastPOSTAL ညွှန်ပြချက် KostromaM ... Main Street - 156010Mira လမ်း - 156019Maly Lane - 156002Miroslavskaya Street - 156012Malyshkovo 371 km n ...
အဆိုပါ 4G Simcoe ကနေပါသလား
အဆိုပါ 4G Simcoe ကနေပါသလား Sun ကအများကြီးပိုလွယ်သည်။ အဆိုပါဖုန်းအသစ်ရဲ့အရွယ်အစားအတွက်သင့် SIM podoydt မဟုတ်ပါဘူး
ဒီဖိုင်ကဘာလဲ - ဖိုင် extension ကို thumbdata3-1763508120 ။ ဖုန်းကနေရာအားလုံးကိုယူတယ်။
ဒီဖိုင်ကဘာလဲ - ဖိုင် extension ကို thumbdata3-1763508120 ။ ဖုန်းကနေရာအားလုံးကိုယူတယ်။ .THUMBDATA3 ဖိုင်အမျိုးအစားအတွက်ဘာလဲ။ .thumbdata3-10 ကျပန်းဂဏန်းပုံစံ၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှု extension တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ် 8923, ဘယ်မြို့လဲ ဒီဟာကမြို့မဟုတ်ပါဘူး၊ Megafon ရဲ့မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ။ omsk altai or tomsk ကွန်ရက်ရှိဒေသများရှိမြို့များနှင့်အော်ပရေတာများ၏တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များပေါ်တွင် telcode.su ဤသည်မိုဘိုင်းဖြစ်သည် ...
ရုရှားကာဇက်စတန်ကနေခေါ်ဆိုမှုများအတွက် prompt အကောင်းဆုံးကွန်နက်ရှင်
ပထမဦးဆုံးမိနစ်နှင့်နောက်ဆုံး -with ရုရှားကာဇက်စတန်ကနေခေါ်ဆိုမှုများအတွက် prompt အကောင်းဆုံးကွန်နက်ရှင်ကိုသင် 11 Teng (အိမျနီးခငျြးနိုငျငံ) ကဘာကိုဆိုလိုဘူး။ 30 Teng ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ရုံပြောနေတာခံခဲ့ရကတည်းက ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,346 စက္ကန့်ကျော် Generate ။